Locko Gracious: Kisah Maleficent dalam bahasa Igbo
The akụkọ amalite ahụ akụkọ otu agadi nwaanyị. A-eto eto akụkọ aha ya bụ Maleficent-ebi ka ọ di ike Moors, n'ókè faerie alaeze nke mmadụ. Dị ka a nwa agbọghọ, ọ dara na ịhụnanya na a mmadụ nwata, a ugbo nwa na-enweghị, aha ya bụ Stefan onye bụ crazy banyere Maleficent na nnukwu oké ọchịchọ ịbụ eze. Ha zutere mgbe Stefan bịara n'ụwa na-ezu ohi Moors. N'ikpeazụ, ha na-aghọ enyi, Stefan isusu ọnụ Maleficent (Isobelle Molloy) na-akpọ ya a nsusu ọnụ Ezi Ịhụnanya. Ọ na Stefan eto ọnụ ruo mgbe otu ụbọchị Stefan agaghịkwa bata ihu-ya. Stefan okenye (Sharlto Coopley) chọrọ iru-ya nrọ nke ibi n'obí eze. Ka ọ dịgodị, okenye akụkọ Maleficent na-aghọ ike, nku-eto wider karịa nke ọzọ fairies ke enye ama okpono ke ererimbot Moors.
Maleficent meriri ndị agha nke King Henry (Kenneth Cranham) na a agha nke eze nke madu wakpoo ndị Moors. Eze mgbu na awa ya okpueze na onye ọ bụla nwere ike igbu Maleficent. Stefan bịara n'abalị na ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma ike igbu ya. N'ikpeazụ, Stefan ere ọkụ nku Maleficent site na iji ígwè (bekee egbu akụkọ), ma mee ka eze dị ka ihe àmà nke igbu ọchụ.
Maleficent obi gbawara n'elu mgba okpuru na ọnwụ nke nku. O wee malite iwu alaeze nke ọchịchịrị na akụkọ n'ógbè. Ọ zọpụtara Diaval (Sam Riley) ndị ṅụrụ iyi ijere ya ozi maka ndụ. Diaval aghọ enyi na ntụkwasị obi. Diaval nwere ike ịgbanwe udi nke a okwukwa n'ime mmadụ ịrụ ọrụ nyere site ọjọ Maleficent.
Otu ụbọchị, Diaval agwa na Stefan bụ ugbu a, eze ga-eme baptism ya mụrụ nwa ọhụrụ nwa, Aurora. Na nloghachi ya maka ịrara Stefan, Maleficent abịa akpọghị akpọ onye a bụrụ ọnụ na ihe a bụrụ ọnụ ehi ụra nwa. Aurora ga-ehi ụra ruo mgbe ebighị ebi on 16 ụbọchị ọmụmụ mgbe ahụ ghewere ya mkpịsị aka Spinner ngwá ọrụ. Stefan usuu maka ebere. Maleficent nkọcha nye nye ka ọgwụ ahụ nsusu ọnụ nke ezi ịhụnanya na na ọwọrọ ihe ọchị "na nsusu ọnụ nke ezi ịhụnanya" nwere ike ọ gaghị adị.
Stefan ọkụ spinneret na ezobe ụlọ a kpọchiri akpọchi. O zitere Aurora na-ebi ndụ n'ime ọhịa na atọ fairies (Juno Temple, Imelda Staunton, Lesley Manville) ruo ụbọchị nke 16 ụbọchị ọmụmụ nke Eze Stefan anọgidewokwa na-anyụ site ikpe ọmụma, ndị ọzọ paranoid, ihe ọjọọ na usiene megide ya.
Ọ bụ ezie na Maleficent asị Aurora (Elle Fanning), ma ọ lekọta onye ahụ n'ime obodo mgbe fairies eleghara ma ọ bụ na-emeghị ya ọrụ. Mgbe ọ dị afọ 15 na afọ, zutere Aurora na Maleficent Maleficent e kwetara na a akụkọ nne mmiri chukwu-eche nche ka afọ. Aurora nọrọ a otutu oge na ike karịrị nke mmadụ ruo mgbe Maleficent maara na ọ malitere amasị adaeze. Ọ gbalịrị iji wepụ nkọcha ụra, ma n'efu.
Mgbe Aurora osobo Prince Phillip (Brenton Thwaites), ha na-agbarịta ibe mmasị n'ebe ibe ha. Phillip bụ na ụzọ ya n'obí Eze Stefan, ma kwere nkwa na-abịa azụ n'oge na-adịghị ahụ ya. On ụbọchị tupu ụbọchị ncheta nke 16, na Aurora kwuru na ya chọrọ ịnọ na Maleficent n'ala-eze. Otú ọ dị, elf ka ileghara agwa Aurora banyere n'ọbụbụ ọnụ nke ọjọ Maleficent. Mmetụta mwute, Aurora gara nna ya ala-eze.
Aurora Stefan ekpochi a mma ụlọ ruo mgbe anyanwụ dara na ncheta nke Aurora. Otú ọ dị, Aurora agbapụla na ụlọ a kpọchiri akpọchi ma wagharịa n'ụlọ mkpọrọ na esetịpụ nile nke ngwaọrụ na e setịpụrụ ọkụ Spinner. A spinning wheel magically-egosi na Aurora ahụ mara a aka na agịga. Maleficent ndị na-adịghị echebe Aurora, sinik n'ime nnukwu ụlọ n'obí. Ọ na-enwe olileanya na Phillip pụrụ imebi nkọcha. Phillip na Maleficent nsutu-emezughị rịọ ya mgbaghara adaeze. Maleficent na Aurora susuo ya n'egedege ihu teta n'ihi na "ezi ịhụnanya" n'ihi na Aurora Maleficent dị ka ịhụnanya nke a na nne na nwa ya nwaanyị. Aurora mesighachiri ọchịchọ ya ịnọ na Maleficent n'ebe karịrị ike mmadụ.
Mgbe na-agbalị iji gbapụ, Maleficent weghaara ígwè ụgbụ. Maleficent apụghị iti onye nēche na Stefan e yi na ígwè ngwá agha. Na anwansi ikpeazụ, Maleficent ịghọ a dragon Diaval. Ọ fọrọ obere ka m gburu, ma Aurora Maleficent gwakwara nku otu ugboro zuru nna ya. -Eji nku, Maleficent iti Stefan onye ahụ nwụrụ.
Aurora ghọrọ nwunye jisiri ike n'otu, dịrị n'otu alaeze abụọ, ala eze nke madu, na fairies ebe Phillip na-ejikọta ya na Aurora. The narrator mgbe ahụ ekpughe agadi nwaanyị gwara m akụkọ a, nke bụ Aurora. Ná ngwụsị nke akụkọ ahụ, Aurora kwuru na alaeze nwere ike n'otu bụghị site a dike ma ọ bụ a ọjọọ Ihọd, ma ọ bụkwanụghị onye ghọrọ dike n'otu oge ọjọọ Ihọd-Maleficent.